Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): October 2013
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုး ဦးဆောင်သည့် နေပြည်တော် အထူး စစ်ဗျူဟာ အ၀ိုင်းခံ ထားရ
at 10/30/2013 12:38:00 PM
ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA ) တပ်မဟာ (၃) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၁၂) သည် အစိုးရ အထူး စီမံ ထားသည့် နေပြည်တော် စစ်ဗျူဟာ (၂) အား (၇) ရက် တိုင်တိုင် ၀ိုင်းထားဆဲ ဖြစ်သည့် အပြင် စစ်ကူ လာပေး နေသည့် အထူး စစ်ဗျူဟာ (၃) ကိုလည်း ယနေ့ မနက် ပိုင်းတွင် ထပ်မံ တိုက်ခိုက် နေဆဲ ဖြစ်သည်ဟု KIA တပ်ရင်း (၁၂) မှူး ဗိုလ်မှူး လဘန်ဂျွန်းအောင် (Major Labang Jawn Awng) က ဆိုပါသည်။
“ ဒီနေ့ မနက် (၆း၃၀) နာရီ ကနေ အခုထိ (၂ နာရီခွဲ) တိုက်ပွဲက ဖြစ်နေ တုန်းဘဲ။ ဗျူဟာ (၃) ကနေ“လား” အကောင် (၅၀) ကျော်နဲ့ ရိက္ခာလား၊ ကျည်ဆံ လားတော့ မသိဘူး၊ ဗျူဟာ (၂)ကို လာပြီး စစ်ကူ ပေးတာလေ။ အဲဒါကို ကျနော်တို့ လူတွေ ဖြတ်တိုက် နေတာပေါ့။ တိုက်ပွဲ ကတော့ မနေ့ ညနေ ကတည်းက နည်းနည်း စဖြစ် လာခဲ့ တယ်လေ ဗျူဟာ (၃) နဲ့က” ဟု ဆိုပါသည်။
ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းနိုင်ဦး ဦးဆောင်သည့် နေပြည်တော် အထူး စစ်ဗျူဟာ (၃) သည်အ၀ိုင်းခံ နေရသည့် အထူး စစ်ဗျူဟာ (၂) အား စစ်ကူ ပေးနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယင်း ဗျူဟာ (၃) အား KIA တပ်ရင်း (၁၂) ကွန်မန်ဒို တပ်များက မနက် (၆) နာရီ ခွဲမှ ညနေ (၂) နာရီခွဲ အထိ ဖြတ်တိုက် နေခြင်း ဖြစ်သဖြင့် တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်လျှက် ရှိပါသည်။ ယင်း ဗျူဟာတွင် ရိက္ခာနှင့် ကျည်ဆံများ တင်ဆောင် လာသည့်လား အကောင် (၅၀) ကျော်လည်း ပါလာ ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ စစ်ဗျူဟာ (၃) တွင် ခလရ (၂၇၆)၊ ခလရ (၂၂၃)၊ ခမရ (၆၀၁) တပ်ရင်းမှ တပ်ဖွဲ့ များဖြင့် စုဖွဲ့ ထားပါသည်။
ဗိုလ်မှူးကြီး မိုးဇော် ဦးဆောင်သည့် နေပြည်တော် အထူးဗျူဟာ (၂) သည် ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ (၂၂) ရက်နေ့ ကတည်းက ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မဘိန်း မြို့နယ် ဆဂနမ်ခွမ် (Saga Nam Hkum) ရွာဟောင်း တိုက်ပွဲ ဂွင်တွင် အ၀ိုင်းခံ ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု KIA တပ်ရင်းမှူးက ဆိုပါသည်။
ဤသို့ကြောင့် ရိက္ခာ ပြတ်တောက်ခြင်း၊ ကျည်ဆံ ပြတ်လတ်ခြင်း ဖြစ်လာ နေသည့် အတွက် အကူအညီ တောင်းခံ ထားသည်ဟုဗျူဟာ (၂) မှ အဖမ်းခံ ထားရသည့် အစိုးရ တပ်မှ သုံ့ပန်း တဦး ဖြစ်သူ တပ်ကြပ်ကြီး ကိုနိုက ဆိုပါသည်။ စစ်ဗျူဟာ (၂) တွင် ခမရ (၄၈၉) ၊ ခမရ (၃၂၀) နှင့် ခလရ (၄၇) တပ်ဖွဲ့များ ပါဝင်သည်။
KIA တပ်ရင်း (၁၂) သည် နယ်မြေ ကျွှမ်းကျင် မှုကို အသုံးချပြီး အစိုးရ စစ်ဗျူဟာ (၂) အား၊ ကွန်မန်ဒို တပ်ဖွဲ့ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ခံစစ် အသွင်ဖြင့် လည်းကောင်း မိုင်းကွင်း များဖြင့် လည်းကောင်း၊ ပျောက်ကျား တပ်ဖွဲ့ များဖြင့် လည်းကောင်း ဗျူဟာ အမျိုးမျိုး သုံးကာ ၀ိုင်းထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ၀ိုင်းထားသော အထူး စစ်ဗျူဟာ (၂) တပ်ဖွဲ့ကို တည်ကြက် ထားပြီး ပေးလာသော စစ်ကူ အထူး စစ်ဗျူဟာ (၃)ကို KIA ကွန်မန်ဒို တပ်များက ထပ်မံ တိုက်ခိုက် နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Read more+++click on link++++
Nam Lim Pa is still likeahostage: not allowed to entered to the village, and not allowed to leave the villagers, surrounded by Tatmadaw.
at 10/30/2013 12:21:00 PM
The government troops reaching to Kawng Hka Pa (close to Man Wing Gyi- which has IDP Camps, the border with China and Shan State (only 30 minutes drive from Nam Hkam in Shan State). The troops movement continues.
Mung Ding Pa villagers are asked the village. So, some are in the forest hiding, and some reached to Banmaw.
Kawng Ja is now controlled by the KIA since yesterday after clashed.
From Banmaw, the last village allowed to visit is Maing Hkawng.
According to villagers, there is high potential to hear more fighting as the Government Troops still surrounding Battalion 12 of the KIA under Eastern Division.
at 10/30/2013 09:06:00 AM
Gara hku law 3.docx
အောက်တိုဘာ (၈-၁၀) ဆွေးနွေးပွဲထုတ်ပြန်ချက်မှ ပူတွဲထုတ်ပြန်ချက်
at 10/30/2013 08:53:00 AM
More++++Click on link ++
တရားတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးကို မအုပ်ချုပ်နိုင်ရခြင်း အကြောင်းများ။
at 10/30/2013 08:15:00 AM
မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြည်တွင်း စစ် ပြဿနာကို အမျိုးမျိုးတွေးတောယူဆ ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့်၊ ဗမာခေါင်းဆောင်များ စိုးမိုးထားတဲ့ ဗဟိုအစိုးရ နဲ့ ဗမာမဟုတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစု ပြည်နယ်များကြား အာဏာခွဲဝေရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောကြဆိုကြတဲ့ အခါ၊ မြန်မာပြည်ကြီးကွဲသွားဖို့ အရေးကို တွေးပူတဲ့ အကြောင်း အလေးထားပြောကြတာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ဗမာ၊ ဗမာ လို့ ပြောကြတဲ့ အခါ ဗမာ သူငယ်ချင်းတွေက မကြိုက်တတ်ပါဘူး။ ဗမာ မဟုတ်ဘူး၊ စစ်တပ်ပါ၊ လို့လဲ ဆိုတတ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ မှန်သင့်သလောက် မှန်ပေမယ့် တကယ့်တကယ် ဗမာစစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့ ဗမာနိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တိုင်းမှာ တူညီနဲ့ ယူဆ ချက်ရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ မြန်မာပြည်ကြီးကို တရားနည်းလမ်းတကျ အုပ်ချုပ်လို့ မရနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယဉ်ကျေးတဲ့ နိုင်ငံတွေလို တရားနည်းလမ်းတကျ၊ အရှက်တရား၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ၊ လူ့အခွင့်အရေး တွေကို တန်ဖိုးထားပြီး အုပ်ချုပ်ရင်၊ အင်္ဂလိပ်အစိုးရ လို လွတ်လပ်ရေးတွေ ပေးလိုက်ရတော့မယ်။ တကယ့်တကယ် စားပွဲပေါ်မှာ ကမ္ဘာ့လူထုရှေ့ အားရ ပါးရ နိုင်ငံရေးစကား လွတ်လွတ်လပ်လပ် ငြင်းခုန်ကြ၊ ပြောကြစတမ်း ဆိုရင် တိုင်းရင်းသား နယ်တွေဟာ လွတ်လပ်ရေး မပေးလို့ မရတဲ့ အနေအထား ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါ အမှန်တရားပါ။ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ကယား၊ ချင်း နယ်မြေတွေဟာ ဗမာဘုရင်များ မပိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဗမာ ဘုရင်များ ကျဆုံးသွားသည့်တိုင်အောင် တိုင်းရင်းသား နယ်မြေတွေဟာ နှစ်ပေါင်း တော်တော်ကြာတဲ့ အထိ အင်္ဂလိပ် အောက် မရောက်သေးပါ။ လွတ်လပ်ရေး ပေါင်းယူကြတဲ့ သမိုင်းအမှန်ကိုတောင် လိမ်ထားဆဲ အဖြစ်အပျက်က သက်သေပြ နေပါတယ်။ ဥပမာ.. ပင်လုံညီလာခံ ကို ကျောင်းသင်ခန်းစာ တွေမှာ ဘယ်တော့မှ မထည့်ခဲ့ပါ။ မြန်မာပြည် သမိုင်းကျောင်းသားတွေ ဘွဲ့သာ ရသွားတယ်၊ ပင်လုံစာချုပ်အကြောင်း တခါမှ မမြင်ဘူးပါ။ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာတောင် ကချင်ပြည်နယ်ဟာ အချုပ်အချာ အာဏာပိုင် ကချင်ဒူဝါများ ကိုယ်ပိုင် နယ်စားများ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ နယ်မြေတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးရေး ဆိုတာ အနည်းဆုံး အခွင့်အရေး ကို တောင်းဆို နေခြင်း ဖြစ်တယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ့် နိုင်ငံ ကိုယ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် တည်ထောင်ခွင့် ရှိတဲ့ လူမျိုးတွေ ဖြစ်တယ်။
ဒီတော့... ဒီလို အခြေအနေ ရောက်မလာအောင် အရှက်တရား၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကို နောက်ချိတ်၊ ဘေးဖယ်ပြီး လူများစုက ဖင်ပိတ်ငြင်းပြီး အနိုင်ကျင့်လို့ရတဲ့ နည်းဥပဒေ တွေ မဖြစ်မနေလိုအပ်လာပါတယ်။ အဲဒါကတော့ တပ်မတော် အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည် အင်အားရှိမည် ဆိုတဲ့ အဆိုအမိန့် ထွက်လာရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းတွေပါ။
ဒီနေရာမှာ လိုအပ်ချက်အရ မဖြစ်မနေ လုပ်ရမဲ့ အပိုင်းတွေမှာ
(၁) ပညာရေး လွတ်လပ်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရေး လွတ်လပ်ခွင့်ရသွားရင် သမိုင်းအမှန်တွေ ဖေါ်ထုတ်လာမယ်။ ခေတ်သစ်တိုင်းရင်းသား လူငယ်တွေ ကိုယ့် ရပိုင်ခွင့် ကိုယ်သိလာမယ်။ (စကော့တလန် ကို နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ကျော် အုပ်ချုပ်ထားလဲ ဗြိတိန်လူမျိုးတွေ လွတ်လပ်တဲ့ အတွေးအခေါ် အောက်မှာ မဖြစ်မနေ လွတ်လပ်ရေး ပေးလာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။) ပညာရေး ညံ့ဖျင်းမှုရဲ့ ရလတ်ကတော့ ဖစ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ဗမာလူငယ်အချို့ ဆွတ်ငြင်းတတ်ကြတာက ကချင်ပြည်နယ်ဟာ မြန်မာပြည်ထဲကအစိတ်အပိုင်းပါ၊ ကချင်တွေကို မပေးနိုင်ပါဘူး။ ဆိုပြီး ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ သူတို့ ပိုင်တယ်၊ လို့ပဲ ပြောတတ်ရုံမှ တပါး တခြား ဘယ်လို ကျိုးကြောင်း ဆက်စပ် ဗဟုသုတ မှ မရှိပါ။ ပညာတတ်အချို့ကတော့ နှုတ်စိတ် နေပေးတတ်ပါတယ်။ မှန် မမှန်မငြင်းတော့ပါ။
(၂) အချိန်မရွေး အာဏာသိမ်း ဗိုလ်ကျ အုပ်စိုးလို့ ရမည့် စစ်တပ် လိုအပ်လာတယ်။ စစ်တပ်ဟာ ချွမ်းချက်အနေနဲ့ ဥပဒေ အထက်မှာ ရှိကို ရှိရမယ်၊ ဆိုတဲ့ သဘောတရား ကို ဆုပ်ကိုင်ထားမယ်။
(၃) ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုစနစ် လိုအပ်လာတယ်။ အကျိုးဆက် အနေနဲ့ လယ်သိမ်း၊ မြေသိမ်းမှုတွေဟာ ထာဝရ တည်နေမှာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက် ကတော့ ထာဝရ ဆင်းရဲခြင်းပါ။ တရားသဘော နဲ့ ပြောရမယ် ဆိုရင် သဏှာ မချွတ်နိုင်တဲ့ ဒုက္ခ ပါ။
at 10/30/2013 08:04:00 AM
You are cordially invited to join members of the Kachin community living in the United States inademonstration to demand an end of the war against civilians in the Kachin region of Burma.
Place: Myanmar Embassy,
2300 S St NW, Washington, D.C., DC 20008
Since the war escalated in the Kachin region, civilians have endured mass atrocities and abuses by the Burma Army.
In September, 2013, women were gang raped and nine villagers were arrested and tortured in Nhka Ga village near Putao. 53 villagers from Nhka Ga have been held as hostages by the Burma army in their own village since September. In recent incidents in Masi township, the Burma army not only indiscriminately attacked, killed, injured, arbitrarily arrested, tortured, and forced civilians to work on the front line but also held them as hostages.
Currently, several hundreds of villagers from Mungding Pa are being trapped in their own villages by the Burma army’s refusal to let them leave. The villagers have been cut off of supplies and humanitarian aid workers have also been barred from entering them.
Thousands of villagers from Kawng Ja, Mungding Pa, Mahkaw Yang, Nam Hpu and Namlim Pa in Mansi township are severely affected by ongoing offensive launched by the Burma army last week. In Namlim Pa, a7 years old was killed and two civilians were critically injured while over 1200 IDPs and village residents are currently facing food shortage as the army encircles their village. In some areas, the government’s abuse is manifested in the form of land grabs and detainment of those who attempt to help civilians or promote human rights.
For example, Daw Bawk Ja,awell-known Kachin land rights activist, was arrested unlawfully and is currently on trial for charges which are politically motivated. In solidarity with these civilians who have been killed, tortured and abused,
please contact the Kachin Alliance.
လိုင်ဇာရောက်တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များအား KIO, မှဂုဏ်ပြုညနေစာဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံ
at 10/30/2013 07:52:00 AM
လိုင်ဇာ၊ ကချင်ပြည်နယ် - တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ အပစ်ရပ်ရေးအကြိုဆွေးနွေးပွဲအတွက် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO ဗဟိုဌာနချုပ်လိုင်ဇာမြို့တွင် ကျင်းပမည့် ‘Ethnic Armed Organizations Conference’ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များညီလာခံသို့ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များအသီးသီး အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်နေ့မှ စ၍ ရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်သည်။
အောက်တိုဘာလ (၃၀) ရက်နေ့မှစတင်ပြုလုပ်မည့် ၄င်းညီလာခံသို့ ညီညွှတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC အဖွဲ့ဝင်များသည် (28.10.2013)ရက်နေ့ နေ့လည်( ၁၂) နာရီခန့်တွင် ရှေ့ဦးစွာ လိုင်ဇာမြို့သို့ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ UNFC အဖွဲ့ဝင်များကို KIOမှ နမ်ဆန်ယန်ထိသွားရောက် ကြိုဆိုခဲ့ပြီး၊ မုန်လိုင်ခက် အနီးတွင် KIA ဒေသရှိ ရခိုင်တပ်မတော်မှရဲဘော်များ၊ အရာရှိများကအလံများကိုင်ဆောင်ကာ ထောင်နှင့် ချီသော လိုင်ဇာလူထုများမှ စီတန်းကြိုဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
(၂၉.၁၀.၂၀၁၃) ရက်နေ့ တွင်လည်း အခြားတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ သည် တရုတ်ပြည် ရွှေလီ လမ်းကြောင်း နှင့် ပြည်တွင်း မြစ်ကြီးနား လမ်းကြောင်းတို့ မှ အသီးသီးရောက်ရှိလာကြကြောင်းသိရှိရသည်။
အဆိုပါတိုင်းရင်းခေါင်းဆောင်များကို လိုင်ဇာလူထုများက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ပေါင်းစုံ အလံများကိုကိုင်ဆောင်ကာ လိုင်ဇာမြို့အဝင်လမ်းမကြီးမှ သံစုံတူရိယာများဖြင့် ခေါင်းဆောင်ကိုယ်စား လှယ်ကြီးများအား လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
ယခု လိုင်ဇာသို့ရောက်ရှိလာကြသောတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များမှာ UNFC နှင့် အခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များဖြစ်ကြသော KNU,KNPP, SSPP/SSA, DKPA (DKBA.KLLT.Kayan Pyitit), WNO, RCSS/SSA, NMSP, ANC, LDU, ARAKAN ARMY, PSLF/TNLA, PNLO, NMSP, CNF, ALP စသည့် အဖွဲ့တို့ ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ထို့ပြင် ယနေ့ရောက်ရှိလာကြသောတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အသီးသီးမှ ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် UNFC ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်ကြီးများအား KIO ဥက္ကဌနှင့်တကွ ဒုတိယ ဥက္ကဌ၊ KIO ဌာနပေါင်းစုံမှအကြီးအကဲအရာရှိများ၊ တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်ကြီးများပါဝင်ကာ Padang ကြိုဆိုရေးခမ်းမတွင် ဧည့်ခံတွေ့ဆုံကာ ညနေ (၅း၀၀)အချိန်တွင် ဂုဏ်ပြုညစာ (မိတ်ဆုံစားပွဲ) ဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံကာ ညစာစားပွဲတွင် ကချင်လူငယ်အဖွဲ့မှ တေးသီးချင်းများ၊ အကပဒေသာများ ဖြင့် တင်ဆက်ကပြဖျော်ဖြေခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
at 10/29/2013 02:03:00 AM
နိုင်ငံတော် အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာများအားဖြေရှင်းရာတွင် ရှောင်လွှဲနေခြင်းကြောင့် တိုင်းရင်းသားများနေထိုင်ရာဒေသတို့တွင် တော်လှန်ရေး ခရီးကြာရှည်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO (၅၃) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်နေ့တွင် KIO ဥက္ကဋ္ဌဇောင်းဟရား မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့သည်။
Read more+++Click on link Kachinnews
တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ အား လိုင်ဇာ ဒေသခံများ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆို - ETHNIC ARMED ORGANIZATIONS CONFERENCE
at 10/29/2013 01:57:00 AM
လိုင်ဇာ ညီလာခံတက်ရောက်ရန် လိုင်ဇာသို့ ရောက်ရှိလာသော တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ အား လိုင်ဇာ ဒေသခံများ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆို
ETHNIC ARMED ORGANIZATIONS CONFERENCE
Zuphpawng hta shang lawm na Salang nkau mi Laiza de du magang.........
ETHNIC ARMED ORGANIZATIONS CONFERENCE hta shang lawm na Rawt Malan Hpung Salang nkau mi, 2013 October (28) ya shani hkying (12:00)noon aten hta Myitkyina – Laiza modo lam hku nna ngwipyaw ai hte Laiza Muklum de du shang wa sai lam chye lu ai.
Du sa wa ai UNFC Salang marai (11) rai nna, dai salang ni hpe Laiza Muklum Mungshawa kaji kaba hte KIO Ginjaw Komiti Salang ni kaw nna hkap tau hkalum la ai lam hpe mung chye lu ai.
ETHNIC ARMED ORGANIZATIONS CONFERENCE zuphpawng kaba hta Uhpung (19) shang lawm na rai nna, 2013 October (30) kaw nna 2013 November praw (1) ya shani du hkra Laiza Muklum hta galaw na re lam chye lu ai.
တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်အချို့ လိုင်ဇာကို ရောက်ရှိ
အစိုးရက အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုးပွဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ ဘယ်လို ပါဝင်နိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ ပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ ညီလာခံတရပ်ကို အောက်တိုဘာ ၃၀ ကနေ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့အထိ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (ကေအိုင်အို) ဌာနချုပ်ရှိရာ လိုင်ဇာမှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ နေ့ခင်းမှာ ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (ယူအန်အက်ဖ်စီ) အဖွဲ့က ခေါင်း ၁၁ ဦး ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့အဖွဲ့ကတော့ မနက်ဖြန်လောက်မှ ရောက်ရှိမယ်လို့ ကေအိုင်အို ပြန်ကြားရေးဌာနက အရာရှိတဦးက အခုလို ပြောပါတယ်။
ဒီညီလာခံအတွက် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF) ကျောင်းသားတပ်မတော် အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၁၈ ဖွဲ့ကို ဖိတ်ကြားထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီညီလာခံရဲ့ အဓိက ဦးတည်ချက်ဟာ အစိုးရက ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ တနိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ် ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံး ဘုံသဘော တူညီချက်ရဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ ကေအိုင်အို ငြိမ်းချမ်း ရေး ဖော်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းအဖွဲ့က ပြောခွင့်ရသူ ဦးဒေါင်ခါးက ဒီဗွီဘီကို ပြောထားပါတယ်။
ဒီညီလာခံမှာ သတင်းယူဖို့ ပြည်တွင်းပြည်ပက သတင်းထောက်တွေလည်း ရောက်ရှိနေပါတယ်။
— with Khin Mgoo and5others.
I amaPolitician notahuman rights worker(DASSK)
at 10/29/2013 01:43:00 AM
Aung San Suu Kyi: falling from grace by BBC cannal4 news
Hena 25-Oct-13 at
She should be shunned by the international community, instead of being greeted with open arms by world leaders. I still don’t understand why Obama visited that country when ‘ethnic cleansing’ was taking place there and still continues.
The plight of these people is so desperate and she is viewed as some kind of peacemaker.
I always questioned her motives all those years ago staying under house arrest, but was shocked by her first comments when questioned about Rohyinga people.
For anyone interested they have history in Burma dating back to nearly 700 years.
Obama’s visit, world leaders courting this woman condones this attempt to seize the lands of Burmese Muslims and to force them out of the country.
Shame on her. Shame on these |Burmese who stand by and let this continue.
phyo kyaw 28-Oct-13 at
Obama also called Malaysiaacountry showing great leadership in fairness, equality and moderation foraMuslim country.
I have lived and commuted back and forth from Malaysia.
Go and look up Bumiputra status.
It is also known as Apartheid in South Africa.
Obama’s actions and words do not mean anything in this part of the real world.
augenbleak 25-Oct-13 at
Great piece!! Lets see if this attracts the same sort of rabid racist right wing drivel that David Blair’s piece did in the Torygraph. ASSK is playing to her Baman Buddhist audience at home.
Yusuf Iqbal 26-Oct-13 at
It is good for the world to know the true picture of DASSK. She is scare of Burmese military propaganda. she knew that Mamas are Ultra racist now and if she acknowledge the truth about Rohingya condition, she will loose popular support.’
Gerry 26-Oct-13 at
The article says ……”Observers and activists have accused Burma’s “icon of democracy” of factual inaccuracies andasurprising shortage of compassion”
Well if they had looked at the history of her treatment of her own family, they shouldn’t be surprised by this….. in my opinion,acold and callous, calculating woman!
win pe 26-Oct-13 at
Take 20 Bangladedh muslims to your country (you named rohingya) and give chance to live and work. After five years let’s discuss about them.
You never know them and write article about them from hearsay is useless.
Try these muslims in UK.
salai 27-Oct-13 at
I don’t think the world shouldn’t jump on to criticize Suu Kyi over her stand and view on stateless Rohingyas in Burma. In humanity, everyone sympathize with the plight of Rohingyas but in reality to co-exist together with Rohingyas, no country in the world offer to accept them including Muslim countries. If the Rohingyas behave themselves and try to be civilized like others, Burmese could easily accept them but they are so savage and criminal. No human can live among Rohingyas infested community as they only create chaos and commit crime.
Gerry 28-Oct-13 at
I just wonder how much of what you write is personal experience, and how much is only what you have heard?
Saw Lu Doh 27-Oct-13 at
100% agree with this article….cause the world seem Ms Suu Kyi asahero of democratic leader of Burma but it was just true to it’s own people; Burmese. On the other, her position to the ethnics people in Burma was different. There arealot of ethnics cleansing if Burma, like war in Kachin State, war to karen people (at previous) these were one ways of ethnic cleansing but she was so silent all the cases. As democratic leader and noble peace prize winner she also cried out her voice concerning this…..but silent….She was the leader of Burmese,,,,,just for Burmese not for Ethnics people in Burma,,,,
We respect her but the respect didn’t come back to the ethnics people that also the reason that Burma became fighting ground between ethnics people and government regime.
The Illchemist 27-Oct-13 at
While Aung San Su Kyi’s remarks are sadly unsurprising, the reporter is wrong to say that Muslims don’t have citizenship in Burma. Rohingya Muslims, perhaps 800,000 people don’t have citizenship. Altogether Burma is home an estimated 4-5 million Muslims, most of whom do have citizenship. Doesn’t mean they’re not discriminated against of course. But anyway, that’safairly glaring error.
Doubt 27-Oct-13 at
I agree with all this except that Im not sure about this affirmation :
“Muslims are denied citizenship in Burma and faceawide range of draconian restrictions on healthcare, schooling, travel – even their ability to have children”
Rohingya YES all Muslims NOT !
Terrell Oung 27-Oct-13 at
US, UK, Australia and others countries what you do with illegal migrants. What Myanmar is doing is same like what the Americans are doing on US Mexico border and many illegal trying to enter UK in the trucks. Did you take them in and gave them citizenship. When you all do that then you can criticise Myanmar. All these problem is started by British colonialism and it is the British bought in all those Bengali from India at that time into Burma. To solve this problem is very easy because it the British who started it, UK should take all these Bengali illegal immigrant. I am 100% sure they will be very happy to go to UK.
BurmeseDaze 28-Oct-13 at
@ Terrell Oung:
Correction: US, UK, Australia and others (sic) countries do not massacre women and children and old people who happen to be *illegal immigrants*.
It’sashame that the gentle Buddhist tradition of tolerance has been replaced with hatred and violence in Burma.
When I read the comments by some Burmese — both inside and outside the country — I see this mix of jingoistic ignorance and patriotic arrogance but not much self awareness.
In the recent past, narrow nationalism turned Burma into the *least developed country* in the world. This time, the current hubristic nationalism will doom Burma: there won’t beacountry to call home. A word to the wise . . .
Meanwhile, will the real Suu Kyi please stand up?: oops, there isn’t one. A media created icon is soon forgotten.
Speedy 27-Oct-13 at
There is only one Mandela in the world. True and honest to his convictions. Aung San Suu kyi isapolitician pure and simple!
Karim632 28-Oct-13 at
There is only one Mandela in the world and he is true and honest to his convictions. He is unusual. Most people seeking power, as she did, are proved in time to be dishonest and self serving. However, in defence of the Buddhists of Myanmar, the Umma areacommunity of believers connected by their faith and as such the Burmese believe that Islam comes before Burmese nationality, hence their distrust.
It’s allasad mess. As to taking in refugees don’t think there is much room in the UK for many more. We are gettingabit crowded.
Paul Martin 28-Oct-13 at
WOW. Her “fall from grace”?
Our impossible expectations… who could possibly live up to them?
You say “Impossible expectations” ? Do you really think that expectingaself styled leader to say something in defense ofapersecuted race, in order to achieve harmony and peace in her country is an impossible expectation? Wow if your standards are so low you’re not going far in this life!
John Sparks 28-Oct-13 at
Yes, fair comment – I meant to say that Muslim Rohingya are denied citizenship and face draconian restrictions. I will have the blog changed to reflect that.
This is just pathetic. Let me quote, “factual inaccuracies andasurprising shortage of compassion” That is how this article started, and it galls me that the author should say suchathing when the facts are already skewed here equally.
There is no such thing asaRohingya race in Burma. In fact, when the country gained independence that Aung San Suu Kyi’s father fought and died for, there were no Rohingya in Burma. These people migrated from Bangladesh during the 50′s to 60′s, squatters basically, took up the language and decided to settle in another’s land. In the states you call them the latino mexicans, in France and Spain you call them Northern Africans. People who were never part of your country crossing borders illegally to sit their pirate selves down.
Nobody in Burma cares for race or religion. We care if you areagood orabad person. Come and see for yourself, stayaday,aweek,amonth. You will see what beingadecent human being behaves like.
Now the Rohingya people.
This conflict started becauseaBurmese girl got raped and killed while passing byaRohingya village. This happened inacountry whereby walking alone asagirl in the middle of the night in Yangon requires no insecurity or protection. Take that into regard.
And then the skirmishes began.
This is about people, not race nor religion, just people fighting and killing for each others beliefs and views. And then somewhere along the way, the international community tagged “religion” and “race” into the mix.
Please kindly go and do your damned research.
I will go do mine. Here. On-site. In Burma.
avinash 28-Oct-13 at
a loaded article imo. when the whole world is closing its borders. what is the problem with her saying muslims have to have burmeseness in them to integrate. how is it different from what the uk or australia or the us demands of immigrants or people of other countries
Martin72 28-Oct-13 at
What can I say? I am disappointed. I was wondering why she wouldn’t comment on the plight of these Arakanese Burmese Moslems… This woman isapolitician: her negociations with the Junta have been blasted by some who were tortured in Insein prison (she was under hosue arrest…) and who belong to her own party the NLD. And she isanationalist in the end:apro-Western political figure who thinks that one cannot be Burmese if one isn’taBuddhist oraChristian. And her theories of “Islamic World Power” would sound like rabid antisemtism if the world Islam was replacy by “Jew”. I am in fact appaled that the victims of yesterday are the corrupt and calculating politicians of tomorrow. She is not “the Lady” any more… I thought 15 years in house arrest would not make her negociate with the Junta, leaving them in power… I thought it would forge an uncompromising character when it came to principles. I was wrong…
- See more at: http://blogs.channel4.com/world-news-blog/aung-san-suu-kyi-falling-grace/26332#sthash.xMpUj9AH.nOzU8XJt.dpuf
မန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူ Prof. Steinberg ကလူမျိုးဖြစ်မှုနှင့်တိုင်းရင်းသားဖြစ်မှုကိုနားလညိ
at 10/28/2013 10:04:00 AM
Post by Kyaw Naing Soe.
မန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူ Prof. Steinberg ကလူမျိုးဖြစ်မှုနှင့်တိုင်း ရင်းသားဖြစ်မှုကိုနားမလညိဘဲသန်းခေါင်စရင်းကောက်ခံပါက 2014 မှာပြသနာ တက်နိုင်ဟုသတိပေးပြီ -မြန်မာ့အရေးဟာတိုင်းရင်းသားလူနည်း စုပြသနာသာဖြစ် -ဒီမိုကရေစီရေးထက်လေးနက်
ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်က အောက်တိုဘာ ၂၆ရက်နေ့မှာ မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။
at 10/27/2013 01:02:00 PM
မန်စီမြို့နယ်မှာ နှစ်ဖက်ကြား တိုက်ပွဲတွေ ပေါ်ပေါက်နေပြီး အရပ်သားတွေ စစ်ပွဲအတွင်း ပိတ်မိနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့် အစိုးရနဲ့ ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြား သဘောတူညီချက်တွေကို ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်က အောက်တိုဘာ ၂၆ရက်နေ့မှာ မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။
Post by N-GUN JA WA.
MYEN ASUYA HPE DU MANAT TAWN LU NA MUNGMASA HPYEN MAN
at 10/26/2013 01:19:00 PM
Myen mungdan hpe shanglawt jawm la tawn ai shani kawn daini du hkra Anhte masha jahpan nlaw ai amyu bawsang ni hpe dip gamyet up sha taw nga ai myen asuya hpe du manat tawn lu ai mungmasa hpyen man gaw.. Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya KIO/KIA hku nna ndai ten hta hkrang shapraw taw nga ai dawdan masing rai nga ai.
(1) Myen mungdan kawn galoi mung n-ga garan pru ai, ngu ai hpe galoi mung sign htu na nre, ngu ai dawdan masing.
(2) Ngang grin ai simsa lam lu na matu tengman ai mungmasa mahtai myit hkrum lam lu hkra shawng bawngban na, ngu ai dawdan masing.
(3) Gasat gala yawm mat wa na matu lahkawng magaalapran kaw yu gawn jep hpung tawn na, ngu ai dawdan masing.
(4) Machyoi hpa ji hpung hpaw nna mungshawa shang lawm lu ai dawdan masing.
Myen asuya gaw gara asuya mi galai lai, lai wa sai ten hta mi rai rai, Du na ra ai ten ni hta mi rai rai, Masu magaw, Hkalem hkalau, Makoi magap, Maw lanyet na asuya sha re. Ndai zawn re myen gumshem asuya hte rau naw jawm nga mayu yang gaw lahta na lawnglam4tup hpe ja ja jum tek tawn nna hparan mat wa yang chyu sha ram hkrak rai na re.
Myen mungdan kawn galoi mung n-ga garan pru ai, ngu ai hpe sign htu kau dat jang gaw Anhte hpe madaw myen asuya ni hta’ni hta’na du manat tawn hkrum ai amyu ni byin mat na. Lachyum gaw myen asuya ni kaning di roi sha, dip gamyet sha tim hkam sha, mana sha na saga ai ngu nna hkam la ai hte bung mat na. Dai majaw KIO/KIA gaw n-ga garan pru na matu galoi mung sign htu na nre.
Ngang grin ai simsa lam ngu ai gaw.. tengman ai, lu ging ai, lu nan lu ra ai mungmasa ahkaw ahkang ni hpe lahkawng maga maren mara hkam la lu jang she ngang grin ai simsa lam mai lu ai. Daini Annau ni hpyi taw nga gaw.. nmai byin ai hpe hpyi taw nga ai nre. Nnga ai hpe hpyi taw nga ai mung nre. Nga taw chyalu Panglong ga sadi hte maren lu nan lu ra ai hpe hpyi taw nga ai she re. Dai majaw tengman rap ra ai mungmasa ahkaw ahkang lu na matu mungmasa shawng jahta ra ai.
Myen asuya hte gap hkat shawng jahkring nna tengman ai mungmasa mahtai lu hkra dara la ga ngu ai gaw.. Yupmang kaw na nga ka, Shingran kaw na tsa pa, (or) Hka ntsaesumla soi ai hpa sha re. Bai nna mye asuya hte gap hkat jahkring na matu maisau pa ntsa kaw sign jawm htu ai lam gaw shanhte myen ni mungmasa amyat htuk la na matu hte Anhte hpe mara tam na matu sha re. Dai majaw lahkawng magaalapran kaw gasat gala gawnjep hpung tawn nna jumtek kau ai gaw madung rai nga ai.
Annu ni hte myen asuya byin ai manghkang gaw mungmasa manghkang re. Daini na mungkan hta mungmasa manghkang hpe tengman ai hku dawdan la lu na matu mungmasha hte mediaamadi shadaw ai lam grai ahkyak nga ai. Dai majaw Annau ni tengman ai nsen langai hte shakut ra sai. Machyoi hpa ji hpung hte media kawn mungmashaamadi shadaw ai lam lu la nna Annau ni myit mada nga ai Awmdawm ahkaw ahkang hpe teng sha lu la na re.
at 10/26/2013 01:13:00 PM
Unfortunately, it’s not true. The vast majority of Muslim Rohingya residents in Sittwe have been cleared out while Buddhists (for the most part) remain in their homes. Furthermore, Muslims are politically powerless. They are denied citizenship in Burma and faceawide range of draconian restrictions on healthcare, schooling, travel – even their ability to have children. The Buddhist population on the other hand face no comparable restrictions – and why would they? They control the local and state government.
Muslims in Burma were troubled by several other references in her BBC interview. First,areference to those Muslims who had “managed to integrate” has made many feel uncomfortable. Here’s what she said: “I would like to make the point that there are many moderate Muslims in Burma who have been well integrated into our society….” That’s got many people asking whether she thinks Muslims have to acquire some sort “Burmeseness” in order to be “accepted”. There is, of course, no such thing asanational identity in Burma. The constitution recognises 135 different ethnic groups
at 10/26/2013 12:57:00 PM
Post by Kachin Land.
Kachin Land Yesterday · We are still suffering because of the British legacy- Aung San Suu Kyi have urged the British government to train Burmese Army (Burmar race only dominated army institution in Burma) - not for Federal Union Army composed of ethnic battalions, she visited Royal Military Academy Sandhurst today. No use of training Burmar race only military officer in Royal Military Academy Sandhurst or elsewhere. We would love to see KNU, KIA, MNSP, SSA, CNF and others ethnic military officers attending Royal Military Academy Sandhurst ready for Federal Union Army. — at Royal Military Academy Sandhurst. ---------------------------- Nyein Chan Aung မြောက် အိုင်ယာလန် ကိစ္စကို ပြောရင် တရားဥပဒေကို လေးစားတဲ့၊ ဗြိတိသျှ အစိုးရနဲ့ လုပ်တာ ဆိုတာကိုလည်း သိဖို့လိုတယ်။ ခင်ဗျားတို့ သွားလေ့လာနေတာတွေက ခါးတောင်းကျိုက် တလွဲ ဟိုတလွဲ ဖြစ်နေပြီ။ ဗြိတိသျှအစိုးရက မြောက်အိုင်ယာလန်က ဗုံးတွေ ခွဲရင် တွေ့သမျှလူတွေကို ဖမ်းပြီး မနှိပ်စက်သလို၊ မြောက် အိုင်ယာလန်က တော်လှန်ရေးသမားတွေကလည်း ခင်ဗျားတို့ ခေါင်းဆောင်တွေလို အာနေတဲ့ သူတွေ မဟုတ်ဘူး။
URGENT PRESS RELEASE- BURMESE ARMY ATTACK AND LOOT KACHIN IDP CAMPS
at 10/25/2013 11:35:00 AM
URGENT PRESS RELEASE - BURMESE ARMY ATTACK AND LOOT KACHIN IDP CAMPS .pdf
at 10/24/2013 12:52:00 PM
Rest in Peace Ms Hpau Lu Kaw of Mung Ding Pa village, Mansi Township by the bullet of Tatmadaw; Government Troop yesterday October 23, 2013
at 10/24/2013 12:24:00 PM
Myanmar Eternal Peace - မြန်မာ့ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး
တပ်မတော်ရဲ့ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျည်မှန်ပြီး မုန်းဒိန်ပါကျေးရွာက ဒေါ်ဖော်လုကော့ တယောက်ကတော့ မနေ့ညနေ ၂၃ အောက်တိုဘာမှာ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ရသွားရှာပြီ။
မုန်းဒိန်ပါ ရွာသား ၇၀၀ ကျော်ကို အစိုးရတပ်မှ ဘုရားကျောင်းသို့ အဓ္ဓမ ထိမ်းသိမ်းထား
POST 23 OCTOBER 2013
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် မန်စီမြို့နယ် မုန်းဒိန်ပါ (Mungding Pa) ကျေးရွာရှိ အပြစ်မဲ့ ကချင်ရွာသား ၇၀၀ ကျော်အား မြန်မာအစိုးရတပ်သည် ယမန်နေ့ ၂၂ ရက် အင်္ဂါနေ့မှ စ၍ ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ကျောင်းတွင် လုံခြုံရေးချထိမ်းသိမ်းထားကြောင်းသိရသည်။
စစ်အင်အား ၂၀၀ ကျော်ရှိသော အစိုးရတပ်သည် ကောင်ဂျာမှ လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်များဖြင့် ပစ်ခတ်လာကာ မုန်းဒိန်ပါ ရွာသို့ဝင်ရောက်ပြီး ရွာသားများအားခြိမ်းခြောက်ပစ်ခတ်ကာ ဘုရားကျောင်းဝင်းသို့ထိမ်းသိမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မုန်းဒိန်ပါမှ ဆရာဇယ်ထောင်း (Sara Ze Htawng) KNG ကချင်သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
“ဒီမနက်တော့ တချို့ကို အိမ်ကဆန်သွားယူခိုင်းပြီး ဘုရားကျောင်းမှာဘဲ အားလုံးပြန်လာချက်ခိုင်းတယ် ဒါမဲ့ရွာပြင်မထွက်ခိုင်းဘူး အပြင်ထွက်ရင် ပစ်သတ်မယ်ဆိုပြီးပြောတယ် ရွာထဲမှာက သူတို့ကြိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ကြိုက်သလိုလုပ်နေကြတယ် ရွာပတ်ပတ် လည်လည်သူတို့ရှိနေပြီး ကြိုက်သလိုလုပ်နေတယ်”
ဆက်လက်ပြီး ယနေ့ နံနက်ထိ အစိုးရတပ်များလှုပ်ရှားလာခြင်းကြောင့် KIA တပ်ရင်း (၁၂) နယ်မြေ (ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ခြမ်း) မဘိန်းမြို့နယ် ရွှေလီမြစ်အနောက်ဘက်မှ ဆဂနမ်ခွမ် (Saga Nam Hkum) တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွာခဲ့ကြောင်း တပ်မဟာ (၃) KIA ရှေ့တန်းစခန်းမှ ပြောသည်။
ယခုချိန် KIA တပ်မဟာ (၃) အောက် တပ်ရင်း (၁၂) ဒေသ သံတံတား၊ မုန်းဒိန်ပါ၊ မန်ကာ၊ ကောင်ဂျာဒေသများတွင် အစိုးရတပ် စစ်အင်အား ၁၀၀၀ ကျော်လှုပ်ရှားနေပြီး ယမန်နေ့ မုန်းဒိန်ပါရွာသို့လှုပ်ရှားလာသော အစိုးရတပ်သည် တပ်မ ၉၉၊ တပ်မ ၈၈ တပ်ပေါင်းစုများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းအစိုးရတပ်သည် ယမန့်နေ့ ရွာသို့ လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များ ပစ်ခတ်စဉ် ကျည်ဆံသည် ဘုရားကျောင်းတွင် ထိမှန်ပြီး အက်သွားကြောင်း ဒေသခံများပြောသည်။
မုန်းဒိန်ပါကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၆၀၀ ခန့်ရှိပြီး လူဦးရေ ၂၀၀၀ ကျော်ရှိရာ အချို့ကျေးရွာသားများသည် နက်လက်ကြီးများရွာသို့ ပစ်ခတ်လာချိန် မိမိလုံခြုံရာလယ်ယာများ နေရာဒေသအသီးသီးသို့ ထွက်ပြေးသွားကြောင်းသိရသည်။
“စားသောက်ဖို့က သိပ်စိုးရိမ်စရာမရှိဘူး လယ်တွေယာတွေရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ် အခုရှိနေတဲ့အစိုးရတပ်က ရွာသားတွေကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ထားလဲဆိုတာကို စိုးရိမ်တယ် ဆွေးနွေးပွဲမှာ စစ်ရှိန်လျှော့ချရေးနဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ထပ်မံမဖြစ်ပွားရန် သဘောတူထားတယ် ဒါမဲ့ သူတို့ဘက်က လှုပ်ရှားလာပြီး တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်လာတော့ KIO ကို လက်မှတ်မထိုးတဲ့အတွက်ကြောင့် ပစ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ ပစ်နေတယ်လို့ မြင်တယ်” ဟု KIO ဒုက္ခသည်ကယ်ဆယ်ရေး ကော်မတီဥက္ကဌ ဆလန်ကဘာဒွဲပီဆာ KNG ကချင်သတင်းဌာနသို့ ကသုံးသပ်သည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့ ဆွေးနွေးပွဲတွင် စစ်ရှိန်လျှော့ချရေးနှင့် တိုက်ပွဲများ ထပ်မံမဖြစ်ပွား စေရေးအတွက် ပူးတွဲ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ (Joint Monitoring Committee) အား ပဋ္ဋိပက္ခဖြစ်ပွား ရာဒေသ အားလုံး အကျုံးဝင်စေမည့် ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် ဖွဲ့စည်းသွား ရန်သဘောတူခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်း အစိုးရတပ်ဖက်မှ စစ်အင်အားတိုးချလှုပ်ရှားမှုများကြောင့် တိုက်ပွဲ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်သည်။
Kyu hpyi karum na lam
Manmaw Ginwang, Mung Ding Pa mare hpe 22/10/2013 ya shana de 4:30 Pm ten hta Myen Hpyen ni sinat kaji kaba sharu bun let shang madu la nna mare masha ni hpe Nawku jawng kaw gawt sharawng da ma ai lam, 23/10/2013 shana de 4:00 Pm ten hta Jan.Hpaulu Kaw (asak 78 ning ) gaw hkrit kajawng nna si mat wa sai lam, Manmaw Ginwang Amu madu Rev. Nangzing Tu Ja shiga shana wa ai.
Ya ten hta Mung Ding Pa mare masha ni zingri zingrat hkrum nga ai re majaw mungkan ting na Jinghpaw Wunpawng Amyu sha ni yawng ja ja akyu hpyi karum ya na matu shana dat ga ai. KBC MNK
British government to discuss use of rape by Burmese Army in meeting with Aung San Suu Kyi
at 10/24/2013 12:19:00 PM
Media Release From Burma Campaign UK
For Immediate Release Wednesday 23rd October 2013
The continuing problem of the use of rape and sexual violence by the Burmese Army was raised in the British Parliament today, duringadebate on international development.
Valerie Vaz MP raised the issue of the use of rape and sexual violence by the Burmese Army, and Justine Greening, the Minister for International Development, responded that she would raise the issue with Aung san Suu Kyi when meeting her in London today.
Last month the Burmese government refused to signadeclaration of commitment to end sexual violence in conflict, despite repeated requests by the British government that they do so. Our media release with more information is available here: http://www.burmacampaign.org.uk/index.php/news-and-reports/news-stories/burma-refuses-to-sign-sexual-violence-declaration/142
Since Thein Sein became President, there has been renewed conflict in Kachin State and Shan State, and Burma Campaign UK has received an increased number of reports of rape and sexual violence by the Burmese Army. No action has been taken to end impunity for rape by the Burmese Army, and President Thein Sein and his government do not even acknowledge that such abuses take place.
"The fact that this issue is being raised in the British Parliament demonstratesagrowing international awareness that despite reforms, the Burmese Army continues to rape with impunity," said Zoya Phan, Campaigns Manager at Burma Campaign UK. "Domestic and international pressure must be placed on President Thein Sein to persuade him to stop the use of sexual violence by the Burmese Army."
For more information contact Zoya Phan on +44 2073244710
Transcript from the debate today:
Valerie Vaz MP:
What contribution her Department is making to the implementation of the Government's preventing sexual violence initiative.
The Secretary of State for International Development (Justine Greening):
The UK will co-hostacall-to-action event in November with Sweden, which will focus on protecting women and girls from all forms of violence in emergencies. That work builds directly on the G8 Foreign Ministers' declaration on preventing sexual violence in conflict, which was led so ably by the Foreign Secretary.
I am grateful for that response. In Burma, reports of rape and sexual violence against women by the army have increased. Given the level of aid that we send to Burma, will the Secretary of State encourage the Burmese Government to sign our declaration and ask her colleagues to raise the matter in Europe and at the United Nations?
The hon. Lady makesapowerful point about what is happening in Burma. Aung San Suu Kyi is in the country and I will be meeting her today. I will be sure to raise those issues with her. I am sure that she takes them as seriously as this House.
Today the transcript of the question and answer is available at:
From 24th October the full transcript will be available in Hansard: http://www.parliament.uk/business/publications/hansard/
Direct Tel: 020 7324 4712
Main Office: 020 7324 4710
Fax: 020 7324 4717
Join our e-mail campaign network and receive the latest updates from Burma Campaign UK automatically. Simply sendablank e-mail to:
The Burma Campaign UK, Registered Company No. 3804730, Registered office address as shown above
ကိုယ့် ကရင် အမျိုးသားတွေကို ဘယ်သူပဲအနိုင်ကျင့်ကျင့် ကရင်က ငြိမ်ခံမှာမဟုတ်ဘူး
at 10/23/2013 12:47:00 PM
Zawzaw Zaw's photo.
ကိုယ့် ကရင် အမျိုးသားတွေကို ဘယ်သူပဲအနိုင်ကျင့်ကျင့် ကရင်က ငြိမ်ခံမှာမဟုတ်ဘူး ( ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထိန်မောင် ) 22.Oct.2013 ကရင်စစ်တပ်က ရန်ကုန်ကိုသိမ်းတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအားမေးမြန်းရာတွင် ““ရန်ကုန်ကို ကရင်စစ်တပ်တွေ လာတာဟာဗမာလူမျိုးတွေအတွက်အကာအကွယ်ပေးရတာဗျ။ အဲဒီအချိန်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဂျပန်တွေခေါ်လာပြီး ဘာလုပ် လို့ လုပ်ရမှန်းမသိတဲ့အချိန်။ ဒီကြားထဲကွန်မြူနစ်ရန်ကလည်း ကာကွယ်ရသေးတယ်။ ဒါကိုတောင် ကရင်ကရန်ကုန်ကို သိမ်း တယ်ဆိုတဲ့ သမိုင်းဆိုးဖြစ်ခဲ့ရသေးတယ်””ဟုဆိုသည်။မြန်မာပြည်သမိုင်းမှာ ကရင်တွေက မြန်မာပြည်ကို တက်သိမ်းတယ်။ ကရင် တွေက သူပုန်တွေ၊ အရမ်းဆိုးတယ်၊ ရိုင်း တယ်လို့သာ သမိုင်းမှာ ဆိုးဆိုးရွားရွား ဖုံးဖိထားကြတာ။ တကယ်တော့ အဲဒီ ခေတ် အဲဒီကာလက မြန်မာပြည်မှာက တစ်ဖက်က အင်္ဂလိပ်ဝင်လိုက် ဂျပန်ဝင် လိုက်နဲ့၊ နောက်တစ်ဖက်က အင်အား အရမ်းကိုကြီးမားနေတဲ့ ကွန်မြူနစ်၊ ကွန် မြူနစ်ဆိုတာက ၀ါဒီသမားတွေ နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ်တွေနဲ့လာပြီးဖုံးအုပ်လိုက် တော့ မြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်သာကြီးထွား လာတယ်။ ကရင်အမျိုးသားရေးက ပျောက်သွားတယ်။ ဒီလို တကယ့်အဖြစ် မှန် သမိုင်းအမှန်ကို ဘယ်သူကမှ မပြော ခဲ့ကြဘူး။ ဒီအကြောင်းကိုပြောပြချင် တယ်။ အဖိုးတို့ဘယ်မှာခြေကုတ်ယူရသလဲ ဆိုရင် တောင်ငူအနီးတ၀ိုက်မှာ။ ကွန်မြူ နစ်ဝါဒီတွေက အားလုံးမှာရှိနေ၊၀င်နေကြ တဲ့ကာလ။ သူတို့က ရက်စက်တတ်တာ ကို ပြည်သူတွေက ကြောက်ကြတယ်။ တချို့ပြည်သူတွေက အဖိုးတို့ကို အားကိုး ကြတယ်။ အဖိုးတို့ဘက်ကလည်း လက် နက်အင်အား၊ လူအင်အားနဲ့တင်မကဘူး။ အရေးကြီးရင် ဒီနယ်မှာ ကာကွယ်နိုင် အောင်လို့ အဖိုးတို့က ကျေးရွာတချို့ကို တောင် လက်နက်တွေ ထုတ်ပေးထားရ တယ်။ ဘယ်လောက်အထိ ကွန်မြူနစ် တွေကို ကြောက်ကြသလဲတော့မသိ။ မိသားစုဝင် ကွန်မြူနစ် ရှိနေကြတာ တောင် ကြောက်ကြသေးတယ်။ အဖိုးတို့ ကရင်တပ်မတော်တည်ထောင်ထားတာက အင်္ဂလိပ်ခေတ်လက်ထက်ကတည်းက။ အဲဒီတုန်းက ကရင်ရိုင်ဖယ်ရယ်၊ ကချင် ရိုင်ဖယ်ရယ် ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ အဲဒီတုန်း က ဗမာ့တပ်မတော်ဆိုတာ မရှိသေးဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဂျပန်ကိုခေါ်လာတဲ့ အခါမှာ ပြန်တော်လှန်ပေးတာက တိုင်း ရင်းသားတပ်တွေပဲ။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဂျပန်ကိုခေါ်လာပြီး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတယ်။ ကရင်က အင်္ဂလိပ်နဲ့အိန်္ဒိယ တပ်တွေကို တိုက်ခိုက်နေတာ။ အဖိုးတို့ အိန်္ဒိယအထိရောက်တယ်။ တစ်ဖက်က လည်း ကွန်မြူနစ်ဆိုတာရှိသေးတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကခေါ်လို့ အဖိုးတို့တပ်တွေပြန်လှည့်ခဲ့ရတယ်။ ဂျပန် ၀င်လာတော့လည်း ပြည်သူတွေကဂျပန် ကိုကြောက်ရပြန်ရော။ ဂျပန်လက်ထဲ ရောက်ပြန်တော့လည်း ဂျပန်လက်ထဲက နေပြန်ကယ်ခဲ့ရပြန်တယ်။ အဖိုးတို့ရဲ့တပ်က တိုက်ပွဲပေါင်း (၅၀၀) ကျော်တိုက်ခဲ့တယ်။ အဖိုးထင်ရ တာက တရုတ်ကစပြီး ကွန်မြူနစ်စနစ် မြန်မာပြည်မှာ ကြီးစိုးလာတယ်။ ကွန်မြူ နစ်တွေ အားသန်တာက ပါတီရယ်၊နိုင်ငံ ရေးရယ်ပဲ။ သူတို့က စစ်ရေးမှာမရဘူး။ အမျိုးသားရေး သူတို့မှာမရှိဘူး။ ပါတီ အလုပ်လုပ်တယ်။ နိုင်ငံရေးတွေလုပ် မယ်။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံရေးတွေနဲ့ အုပ် ထားတယ်။ ကရင်လူမျိုးတွေအပေါ်မှာ ၀ါဒဖြန့်တာတွေလုပ်ထားတယ်။ ပဲခူးရိုးမ ကလာတဲ့ ကွန်မြူနစ်တွေဟာ ကွန်မြူနစ် ခေါင်းဆောင်တက်ဖြစ်တော့ ဘယ်လိုဖြစ် သွားသလဲဆိုရင် နိုင်ငံရေးနည်းအရဖြေ ရှင်းရမယ့်ပုံစံက ကျဉ်းမြောင်းသွားရော။ အဲဒီကစပြီး ကရင်တွေ ရဲ့လုပ်ဆောင် ချက်၊ကရင်သမိုင်းဆိုတာကို ဖျောက်ပစ် ကြ တော့တယ်။ အမျိုးသားရေးဆိုတာ ကျယ်ပြန့် တယ်။ နိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူး။ ကွန်မြူနစ် ဖလိုးတွေ နိုင်ငံရေးနည်းအရ နိုင်ငံရေး စကားတွေနဲ့ အဆင်မပြေတော့ အဖိုး တို့ရဲ့ ကရင်တွေဘက်ကို သမိုင်းဆိုးတွေ နဲ့ လုပ်လိုက်ကြတယ်။ ဖုံးအုပ်ထားကြ တယ်။ သူတို့ပြောပြောနေတဲ့ နိုင်ငံရေး နည်းအရ ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုလည်း အဲဒီ တုန်းက ကရင်မှာပါတီရှိခဲ့ဖူးတယ်။အိန်္ဒိယ ကွန်ကရက်ပါတီထက်တောင်စောတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကရင်အမျိုးသားနိုင်ငံရေး တိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က အမျိုးသားရေးပဲ။ နိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူး။KNU စရပ်တည်တာ ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ ကရင်တွေက ရန်ကုန်တက်သိမ်းတာ မဟုတ်ဘူး။ ရန်ကုန်ကလူထုက လာ ကယ်ပါဦး၊ ကွန်မြူနစ်တွေကပြည်သူတွေ ကို နှိပ်စက်နေတယ်ဆိုလို့အမျိုးသားရေး အရ ကွန်မြူနစ်ရန်ကဗမာပြည်သူတွေကို အကာအကွယ်ပေးခဲ့ရသေးတယ်။ ရန်ကုန် ရောက်ဖို့ (၇)မိုင်ပဲလိုတော့တယ်။ နောက် တော့ ကရင်တွေ ရန်ကုန်မှာ မနေနိုင်လို့ ပြန်ကြတာ။ တကယ်သိမ်းရင် အဲဒီ ကတည်းက သိမ်းပြီးပြီပေါ့။ မြန်မာပြည် မှာ ကွန်မြူနစ်ကြီးစိုးလို့ လူထုက အကူ အညီတောင်းလို့အမျိုးသားရေးအရ ၀င်ပြီး ကူညီတာ။ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားတွေကို ဘယ်သူ အနိုင်ကျင့်လဲ ရှမ်းကိုလား။ ကချင်တွေလား။ ဘယ်သူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အမျိုးသားတွေတခြားနိုင်ငံသားတွေ က အနိုင်ကျင့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားဘယ် သူကပဲဖြစ်ဖြစ် အနိုင်ကျင့်ခဲ့ရင် ကရင် တွေကငြိမ်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။အမျိုးသား အကျိုး စီးပွားမပျက်စီးအောင် ကာကွယ် စောင့်ရှောက်တယ်။ ဗမာ့တပ်မတော်မရှိခင်ကတည်းက အဖိုးတို့ရဲ့ တပ်ဟာ အမျိုးသားတွေ အပေါ် စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။ အဖိုးတို့ လိုချင်တဲ့ အမျိုးသားရေးဟာ အဲဒါတွေ ပဲ။ အခုတော့ မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေက နိုင်ငံရေးအရ ဘာ အတွေးတွေ၊ ဘယ်လိုသီအိုရီတွေ ထည့် ဆွေးနွေးကြလည်း မသိဘူး။ နားကို မလည်တော့ဘူး။ ဒီဘက်ခေတ် ဦးခင် ညွန့်လက်ထက်က ဖဒိုမန်းရှာက ကရင် တပ်နဲ့လုံးဝ ပြောခွင့်မရှိ သူပဲပြောမယ်။ သူပဲအစိုးရနဲ့ ညှိနှိုင်းခဲ့တာတွေ လုပ်ခဲ့ တယ်။ သူသွားပြောတာက (၁) အကျဉ်း သားတွေအကုန် လွှတ်ပေးရေး၊ (၂) ဒီမိုက ရေစီအရေးဆိုပြီး လျောက်လုပ်ပြီး ဒီမိုက ရေစီနိုင်ငံရေး စကားတွေကိုပြော ပြီး တိုင်ပင်နေတယ်။ နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ အဖြေရှာမယ်ဘာညာပေါ့။ နိုင်ငံရေး နည်းနဲ့ဖြေရှင်းပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ သွားလိုက်ပြန် လိုက်လုပ်ရော။ လူထုက စစ်ပွဲကိုလည်း ရင်ဆိုင်နေရ တစ်နေ့စာ တစ်နေ့ ထမင်း စားဖို့မနည်းကြိုးစားနေရ တဲ့အချိန်။ ဦးခင်ညွန့်နဲ့ အကျဉ်းသား အရေး၊ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးတွေတိုင်ပင် ပြောဆို နေတော့ ဦးခင်ညွန့်က ““နင်လာတာ နင်တို့ ကရင်အကြောင်းပြောလေ။ နင်ပြောနေတဲ့ စကားထဲမှာ ကရင်အမျိုး သားအကြောင်း တစ်လုံးမှမပါဘူး”” ပြော ခဲ့ရတယ်။ ဗိုလ်မြက စစ်တပ်နဲ့ ဖြေရှင်းဖို့ ပဲပြောတယ်။ နိုင်ငံရေးအရ နိုင်ငံရေး စကားတွေ ပြောနေတာက အစိုးရနဲ့ ကရင်အကြား လိုရာမရောက်ခဲ့ဘူး။ နိုင်ငံ ရေးသမားတွေရဲ့ လက်ချာနဲ့ အချိန်တွေ ကုန်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးယူမှဖြစ်မယ် ဒါမှ အမျိုးသားရေးဆိုတဲ့ကိစ္စအတွက် ကရင် ပြည်သူတွေစစ်ဘေးက သက်သာမှာ။ပြည်တွင်းမှာလည်းKNU့ နဲ့ဆက်သွယ် လို့ ဟိုလူ့ကိုဖမ်း၊ ဒီလူ့ကိုဖမ်းနဲ့ ကရင်ဆို သူပုန်ပဲသူတို့က သတ်မှတ် ၀ါဒဖြန့်တော့ လူထုနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကပါ ကရင် ဆို သူပုန်ပဲဖြစ်ကုန်ရော။ တည့်တည့်ပြောရရင် ကျွန်တော် တို့ အစီအစဉ်က ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တုန်းက တောထဲကို ခံယူချက်နဲ့ ထွက်လာတဲ့ ကျောင်းသားတွေနဲ့ လက် တွဲပြီး မြန်မာပြည်ကို မကောင်းဆိုးဝါး တွေလက်ထဲက ကယ်ဖို့ အပြတ်နှိမ်နင်းဖို့ အစီအစဉ်။ ဒီကြားထဲ မီဒီယာကနေ ဖဒို မန်းရှာကိုသတ်တယ် ဘာညာဆိုပြီး ပြော လိုက်တော့ အဲဒါနဲ့ ဗိုလ်မြက ဒီလောက် တောင်ဖြစ်လှတာ ဒီကောင့်ကို ရှင်းပစ် လိုက်ကွာဆိုလို့ အဖိုးပဲထိန်းခဲ့ရတာ။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးယူမှ ဖြစ်မယ် ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ။ ဒါကိုတောင် ကျောင်းသားတွေက ငိုယိုပြီး သေနတ် အပ်ပြီးသွားကြပြီ နိုင်ငံခြားကို ထွက်ကုန် တယ်။ သူတို့က စစ်တပ်ကို ဘယ် လောက် နာကြည်းသလဲဆိုရင် မြန်မာ ပြည်ကို မကောင်းဆိုးဝါး လက်ထဲက ကယ်ဖို့အစီအစဉ်ကို ပဲသဘောကျတယ်။ နောက်ဆုံးစစ်တပ်ကို မတိုက်ရတော့ ၀မ်းနည်းပြီး ပြည်ပထွက်ကုန်ရော။ အဲဒါ ပဲ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးမရခင်က တည်းက ပေါ်လာတဲ့ ကရင့်စစ်တပ်က ရန်ကုန်တက်သိမ်းတဲ့ သူပုန်တွေပဲလို့ ၀ါဒဖြန့်ခဲ့တာ အခုထက်ထိပဲ။ ဗမာ စစ်တပ်မရှိသေးတဲ့ကာလမှာ ဗမာပြည်သူ တွေက ဒုက္ခအမျိုးမျိုးကြားထဲက သူတို့ အားကိုးမျှော်လင့်တာ ကရင့်စစ်တပ်၊ ကရင်စစ်တပ်ကပဲ ကာကွယ်ပေးခဲ့ရတယ် ဗျ။ ဒီဘက်ခေတ်ကျတော့လည်း ၁၉၈၈ ခုနှစ်က ကျောင်းသားတွေက မြန်မာ့ စစ်တပ်အပေါ် နာကြည်းနေလို့ သွေး မထွက်အောင် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အမုန်းခံ အဖိုးပဲ ရှင်းခဲ့ရတယ်။ လွတ်လပ်ရေးမရ ခင်ကတည်းက ကရင်စစ်တပ်ကယနေ့ အချိန်ထိ အမျိုးသားရေးစိတ်ရှိနဲ့ လုပ် ခဲ့တယ်။ ကောင်းကြောင်းတွေနဲ့ ၀ါဒ မဖြန့်ခဲ့ဘူး။ မြန်မာပြည်ထဲမှာတော့ “အို” ကရင်ဆို သူပုန်ဟိုအရင်ကရန်ကုန် တောင်တက်သိမ်းတယ်ဆိုပြီး ၀ါဒတွေ ဖြန့်ခဲ့တာ ဘယ်သူမှလည်း မဖြေရှင်းခဲ့ ဘူး။ အဓိကကတော့ အဲဒီလိုပြော တာဟာ ကွန်မြူနစ်ဝါဒီသမားတွေရဲ့ လက်ချက်ပဲ။ သူတို့ကိုမောင်းထုတ်လို့ ၀ါဒ ဖြန့်တာပဲလို့ထင်တယ်။ ( ဒါ ကရင့်သမိုင်း ကရင်တို့ ထားခဲ့တဲ့ အမျိုးသားရေးပဲ ) by - Hot News